IOS 10: Batariga, waxqabadka iyo dhinacyada kale ee la tixgelinayo | Waxaan ka socdaa mac
Applelised | | macruufka
Carada ayaa sii kordheysa waxayna isticmaaleyaashu si joogto ah uga warbixinayaan arrimaha nolosha batteriga iyadoo la cusbooneysiiyay ugu dambeysay ee nidaamka mobilada ee Apple ku shaqeeya. Dhab ahaantii miyuu cunaa wax badan oo bateri ah? Hadday sidaas tahay, maxaa sababi lahaa? Kahor intaanan bilaabin, waxaan rabaa inaan sharaxo in maqaalkani uu ku saabsan yahay ra'yiga, laakiin sidoo kale mowduuc. Doodaha aan hoosta ku soo bandhigi doono waxay ku saleysan yihiin waaya-aragnimadayda iyo wixii aan awooday inaan akhriyo ee aan ka ogaado iDevices-ka. Dhinac qaar ayaa laga yaabaa inaanay gebi ahaanba sax ahayn ama ay jiri karaan adeegsadayaal la kulmaya hawlgal ka duwan. Noqo sida ay dhici karto, halkan ayaan tagnaa.
Sii wad akhriska oo ogow waxa ku dhaca batteriga iyo waxqabadka qalabkaaga nidaamyo cusub nidaamyada hawlgalka loogu talagalay jiilalka iyo qalab aad u horumarsan. Wax kasta oo dhalaalayaa ma aha dahab oo in kasta oo lagu talin karo in la cusbooneysiiyo, sidoo kale waxaa jira xoogaa faa'iido darro ah.
1 Batariga ku jira iOS 10 iyo dhibaatooyinkiisa
2 Dhibaatooyinka qalabka intiisa kale iyo xalka
Batariga ku jira iOS 10 iyo dhibaatooyinkiisa
Maaha inay tahay nidaam hawlgal oo aan si ku filan loo habeyn ama uu ka cuno awood aad u badan qalabkayaga. Ma dhihi karno waa mid aan dhameystirneyn ama aysan jirin shaqo ku filan oo laga qabtay. Maxaa dhacaya ayaa ah in loogu talagalay iPhone-ka cusub ee 7 iyo 7 lagu daray, waana halka ay dhibaatooyinku ka yimaadaan. Boodka awoodda u dhexeysa iPhone 6 iyo 6s waa mid muhiim ah, oo xitaa ka sii weyn haddii aan ka gudubno 6 illaa 7 ama 7 oo lagu daray. Ma aha oo kaliya Ram oo labanlaabmay oo xitaa seddex jibaaray awooddeeda, laakiin sidoo kale processor-ka ama qori. A10-ka cusub ee ay wataan kuwa jiilka toddobaad ayaa leh waxqabad gaar ah iyo daryeel batteriga. Iyagu waa kuwa si dhakhso leh u dhakhso badan oo nooma deyn doonaan xaalad kasta.
Haddii aan taas tixgelinno, Waxay u taagan tahay sabab in iOS 10 ay si fiican ula shaqeyn doonto iyaga. Laakiin isbeddelku waa mid naxariisdarro ah. Ka tagida A8 chip iyo 1Gb Ram ilaa 2 ama 3 ee iPhone 7 iyo jibbaar laba jibbaaran ... iOS 10 wax dhibaato ah kuma lahan aaladaha hada jira maxaa yeelay udub dhexaadkiisa iyo waxyaabihi kaqeyb galey waa kuwo ixtiraam u leh batteriga iyo kuu ogolaanaya inaad hesho wax walba Isku dhig nidaamka qalliinka si fudud. Intaa waxaa dheer, heerka qalabka waxaan aragnaa koror ku yimaada cabirka iyo awoodda batteriga. Aad iyo aad u badan oo kaliya maahan in waqtiga isticmaalka batteriga lagu ilaaliyo iPhone-ka cusub, laakiin sidoo kale waxaa lagu kordhiyay ilaa hal ama laba saacadood oo adeegsi isdaba joog ah ka badan. Layaab leh gaar ahaan kiisaska 4, qaabka inji.
Dhibaatooyinka qalabka intiisa kale iyo xalka
Qaar ka mid ah astaamaha cusub ee cuni kara batteriga ayaa ah Wararka Apple Music, Widget-ka iyo shaashadda qufulka cusub, Siri ama soo jeedimaha, animations-yada qaar iyo isticmaalka iCloud haddii ay tahay mid aad u kacsan oo joogto ah. Waxa kale oo jira dhinacyo kale oo saameyn ku yeelan kara oo haddii aan isticmaalno barnaamijyo wax badan cuna ama u baahan awood dheeraad ah waan ogaan karnaa. Haddii aad ka qoomameyso inaad cusbooneysiisay ama aad rabto inaad keydiso batari yar, waad furi kartaa dhammaan xulashooyinka iyo astaamaha aad rabto, laakiin sidoo kale ma ogaan doontid farqi badan.
IOS 10 waxay isticmaashaa batteri badan maxaa yeelay waxay qabataa waxyaabo badan oo dheeri ah. Waxaa laga yaabaa in noocyada mustaqbalka ay ixtiraami doonaan tamarteenna wax yar, laakiin ma aamini karno. Kordhintu waa ikhtiyaari oo Apple waxay diiradda saaraysaa ka shaqeynta aaladahaaga cusub, ma ahan kuwaagii hore. In kasta oo wax walba jiraan, dadka isticmaala iPhone-ka lagu daray moodooyinka ma ogaan doonaan inta badan isbeddelka. Kuwa aniga ila mid ah waxay leeyihiin 4,7-inji may, iyo sidoo kale iPad Air 2 iyo ka horba. Haddii ay wax badan kugu dhibto oo aad rabto batteri dheeraad ah, waxaad dooran kartaa kiisaska batteriga, inaad ka qaadatid laba jeer maalintii ama aad qaadatid xeedho la qaadan karo. Beddel goobaha qalabka ama ka fikir haddii la gaadhay waqtigii la iibsan lahaa qalab cusub, oo aan u malaynayo inuu yahay midka ugu badan ee lagula taliyo iyadoo kuxiran waxaad haysato.
Taladaydu maaha inaad ku mashquusho inaad iPhone isticmaali karto saacad ama wax la mid ah. Waxay kudhowaad socotaa maalinta oo dhan oo waa inaadan helin wax dhibaato ah. Ka soo celi xoq si aad u nadiifiso haddii aad rabto oo aad bedesho goobaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » macruufka » IOS 10: Batariga, waxqabadka iyo dhinacyada kale ee la tixgelinayo
Alejandra Delgado sawirka meeleynta dijo
Sideen uga warbixiyaa ios 10 arin?
Jawaab Alejandra Delgado
Apple waxay dooneysaa inay ka furto Apple Store iyo xarunta munaasabada maktabada Carnegie ee Washington DC